Fikarohana momba ny firaisana Raharaha fanalefahana indray ny Nostradamus | Hans Christian King miaraka amin'ny tranga fanavaozana an'i Francois Rabelais | Michael Crichton sy William Wells Brown | Michael Bernard Beckwith - Fikarohana Reincarnation
From: Teraka indray: International Edition
“Afon-tany mihoa-pampana avy afovoan'izao tontolo izao
Hiteraka horohoron-tany manodidina ny Tanàn-dehibe. ”
“Ny lanitra dia hirehitra amin'ny mari-pahaizana 45
Manantona ny tanànan'ny tanàna vaovao ny afo
Tonga avy hatrany dia nisy lelafo be miparitaka. ”
Ireo andalana ireo dia nosoratan'i Nostradamus ao amin'ny 1555. Raha nanafika ny foibe ara-barotra New York maneran-tany tamin'ny volana septambra 11, 2001 dia maro ny nandika an'io hetsika io ho fahatanterahan'ny faminaniana nataon'i Nostradamus efa ho 500 taona lasa izay. Ny nahatonga ny faminaniana ho toa mifanaraka amin'ny fomba tsy misy dikany dia ny hoe ny fiaramanidina famonoan-tena faharoa dia namely ny tilikambo faharoa ary nisy elatra nitaingina zoro 45. Noho io faminaniana io dia nisy tombony vaovao nipoitra tao Nostradamus. Hotohiko izao fa natsangana indray i Nostradamus amin'ny maha-psychiana matihanina azy Hans Christian King. Kitiho ireo sary mba hampitombo azy ireo.
Nihaona tamin'i Hans Christian King aho tamin'ny Desambra 7, 2003, rehefa nanatrika programa misy lohateny aho Dingana telo, izay nanasongadina an'i Hans, Maria Shaw sy Carla Baron. Nampahafantariko ny tenako tamin'ireny haino aman-jery telo ireny ary nanontany aho raha azoko atao ny mamorona fiainana taloha ho azy ireo, amin'ny fampiasana Ahtun Re, mpitari-dàlana nalaina tamin'ny alàlan'i Kevin Ryerson, izay naneho fahaiza-manao ny filalaovana teo aloha.
Ny fanahy tsy ahtun dia mandà ny hampahafantatra ny fiainana taloha i Hans Christian King ankoatra an'i Hans mivantana
Nahafaly ahy i Hans. Rehefa naninjitra ny tanako mba hihozongozona izy dia nitantana ny tanako izy roa. Nikapoka ahy ho fanahy tena be fitiavana izy. Rehefa nanontany aho raha afaka manontany an'i Ahtun Re mandritra ny androm-piainany taloha, izany dia azo hamantarana ara-tantara, hoy izy, "eny."
Rehefa nanontany momba ny fananganana razana taloha ho an'i Hans i Ahtun Re, dia tsy nety nilaza izany aho. Nanao fihetsiketsehana aho ary nilaza fa nanome alalana ahy i Hans, koa maninona no tsy hanomezana ahy ny fiainana teo aloha i Ahtun Re. Ahtun Re namaly hoe: "Hiresaka amin'i Atoa King mivantana isika." Ary hoy koa izy: "Tena mahaliana izany."
Nanandrana nandamina fivoriana ho an'i Hans tamin'i Kevin Ryerson izahay, satria samy natao tao Las Vegas izahay rehetra tamin'ny faran'ny herinandro teo tamin'ny Janoary 2004. Mampalahelo fa tsy mandeha ny lojika mandritra ny fivoriana, na dia samy niara-nisakafo hariva izahay isaky ny asabotsy alina. Niara-nipetraka tamin'i Hans sy Kevin aho, mba hahafahan'izy ireo mifampiresaka. Henoko i Hans izay mametraka izao fanontaniana manaraka amin'i Kevin izao: "Maninona i Ahtun Re no tsy hanome an'i Walter ny fiainako taloha?", Hoy ny navalin'i Kevin: "Matetika dia te hilaza aminao zava-dehibe mivantana ny Fanahy."
Walter dia manana ny Intuition fa i Hans no Reincarnation an'i Nostradamus
Ny hariva sy ny faran'ny herinandro dia tsy nifarana. Herinandro na roa taorian'io dia nisaintsaina ny zava-nitranga aho. Nanontany tena foana aho hoe: "Fa maninona i Ahtun Re no tsy hanome ahy ny fiainana taloha ho an'i Hans?" Tena tsy nampoiziko fa i Hans Christian King no nampiasa ny teny telo. Fantatro fa rehefa reincarnate ny olona dia matetika izy ireo no misafidy mampiasa dikanteny amin'ny anarany izay mitovy karazan-dàlana mitovy amin'ireo fotoam-piainana teo aloha. Ohatra tsara naseho tao amin'ny boky, Fiverenan'ny Revolisionera ny raharaha Barbara Marx Hubbard, izay tamin'ny vanim-potoana Revolisiona Amerikana dia voatondro ho Mercy Otis Warren. Tsy ny vehivavy ihany no nifidy ny hampiasa anarana telo teny amin'ny fotoana roa, fa izy ireo koa dia mizara ny toetran'ny maha-mpanoratra ara-tsaina azy ireo.
Na dia tsy nahalala ny fahazoan-dàlana anarana fotsiny aho tamin'izany fotoana izany, dia nisaintsaina ny momba an'i Hans Christian King sy izay mety ho izy taloha. Namerina tamim-pahanginana tao an-tsaiko ny anarana hoe "Hans Christian King," ary tao an-tsaiko tampoka ny anarana hoe "Nostradame". Tsapako fa i Michel de Nostredame, ny tena anarana hoe Nostradamus, dia nanana ny tarika mitovy amin'i Hans Christian King.
Fiainana farany momba ny fiainana taloha: i Hans dia manana ny endri-javatra mitovy endrika amin'ny hoe Nostradamus
Nanaovako haingana ny Internet ho an'ny sarin'i Nostradamus ary hitako fa sary tokana ara-tantara iray ihany no hitan'i Cesar Nostradame zanany lahy, ary ny tarehin'i Hans dia mifanentana amin'ny tavan'i Nostradamus. Tamin'ny fotoam-pivoriana manaraka niaraka tamin'i Kevin Ryerson, Ahtun Re dia nanamafy fa i Hans Christian King no reincarnation an'i Nostradamus.
Rehefa nahazo izany fanamafisana izany aho dia niantso an-telefaona an'i Aaron Hunt, mpanampy an'i Hans manokana, mba hanambara aminy ny vaovao. Tena gaga i Arona. Nanontany an'i Aaron aho mba hilaza amin'i Hans ny lalao. Rehefa niantso an-telefaona an'i Hans i Aaron mba hampahafantatra azy momba ny fiainany taloha, andao atao hoe fandaharana inona no nijeren'i Hans tamin'ny fahitalavitra? Nijery programa momba ny Nostradamus i Hans.
Nahazo fiainana tamin'ny fiainana tamin'ny alàlan'ny famakiana vakiana ara-tsaina i Hans hatramin'ny faha-20 taonany. Nomena azy ho iray amin'ny dimy psikolojika ambony any Amerika i Miami Herald, ary notendren'i Yale mpitsabo aretin-tsaina Brian Weiss, MD, mpanoratra ny Fiainana maro, Masindahy maro.
Miaramila amin'ny fanarahan-dalàna i Guides Hans fa i Hans dia Nostradamus tamin'ny fiainana taloha
Amin'ny fanatontosana famakiana ara-tsaina dia miara-miasa amin'ny fanahy efatra i Hans. Ireo mpitari-tsaina ireo dia manangona fampahalalana ho an'ny mpanjifa iray ary mamindra izany amin'ny televiziona amin'i Hans amin'ny fahitalavitra. Notaterin'i Hans tamin'ny mpanjifany ny fanazavana avy eo.
Taorian'ny nampahafantarina azy momba ny lalao niainany taloha niaraka tamin'i Nostradamus, dia nanontany ireo mpitarika ny fanahiny i Hans raha marina izany, fa izy no reincarnation an'i Nostradamus. Nolazain'ireo mpitari-dàlana an'i Hans fa marina izany ary tsy tokony hamela izany ho eo an-dohany.
Taty aoriana, rehefa nanontany an'i Hans aho raha afaka milaza ny fiainany taloha amin'ny maha-Nostradamus ahy, dia nomena alalana hanao izany i Hans. Rehefa nieritreritra aho hoe, "Mety haneso anao ny olona noho izany," hoy ny navalin'i Hans: "Ny fahamarinana dia fahamarinana."
Ny porofo mivaingana momba ny reincarnation dia mampiseho fa mitovy ny toetran'ny olona ary matetika ny fanomezam-pahasoavana mitovy aminy, hatrany amin'ny fiainana ka hatrany amin'ny fiainana. Fony aho tany Las Vegas tamin'ny Janoary 2004, nialoha ny fotoana niforonan'ny hypnotisma fa Hans i Nostradamus, dia nanana fivoriana niaraka tamin'i Hans aho. Ny mahaliana azy dia ny hoaviko rehetra izao. Avy eo aho dia nandidy CD izay novokarin'i Hans, izay ahitana santionany amina santionany amin'ny mpanjifany samihafa. Amin'ireo fotoam-pitsarana rehetra ireo, i Hans dia voamarina mialoha ny ho avin'ny mpanjifany.
Misy fahasamihafana eo amin'ny sarin'ny besinimaro an'i Nostradamus, na izany aza, ary persona an'i Hans Christian King. Nostradamus, noho ny faminaniany, dia nantsoina hoe "Mpaminany ny Fahafatesana." Amin'ny lafiny iray, hitako i Hans ho "Mpaminany ny Fahazavana sy ny Fitiavana." Ny hevitro dia i Nostradamus, izay nampiofanina ho dokotera mpitsabo. lehilahy iray izay nanao vivery ny ainy tamin'ny fitsaboana ireo niharam-boina tamin'ny Black Plague tany Frantsa, dia diso hevitra. Nostradamus dia toy ny maha-olona maha-olona an'i Hans Christian King. Ny asany voasoratra, Mpaminany, izay nametraka azy ho "Mpaminany ao amin'ny Doom", nanaloka fotsiny ilay lehilahy, Michel de Nostradame.
Raharaha fanalefahana indray an'i Francois Rabelais | Michael Crichton
Ilay Mpanjaka Christian Christian | Ny raharaha Nostradamus dia niteraka tranga faharoa mahaliana. Nostradamus nandeha sekoly ara-pitsaboana niaraka tamin'ny lehilahy iray antsoina hoe Francois Rabelais, izay nanjary mpinamana akaiky tamin'i Nostradamus. Na dia nampiofana ho dokotera aza i Rabelais dia iray amin'ireo mpanoratra fanta-daza indrindra amin'ny tantaram-pirenena frantsay. Rabelais koa dia nanoratra momba ny ho avy ary namoaka ny Pantagrueline Prognostication ao amin'ny 1533, izay fanoratanana almanakôsika izay nanambara mialoha ny ho avy. Fanta-daza amin'ny fanoratana tantara goavambe momba ny goavambe roa izy, Gargantua sy Pantagruel.
Nandritra ny fandalinana an'i Rabelais, dia nahitana fehezanteny manokana aho fa nipoitra indray i Rabelais tamin'ny fotoan'andro amin'izao fotoana izao amin'ny maha dokotera sy mpanoratra iray hafa, izay manoratra tantara mahafinaritra ihany koa. Ny tsipiko izay no nahatonga an'i Rabelais dia niverina indray tamin'ny farany Michael Crichton, Mpanoratra ny Park Jurassic.
Ity lalao ity dia nohamafisin'i Ahtun Re. Jurassic Park dia misy dinosaurs goavambe izay averina velona. Raha izany, ny toetran'ny epistika fantasy momba ny biby goavambe dia hita ao amin'ny fiainan'i Rabelais sy Crichton.
Nahafinaritra ahy ny nihaona tamin'i Michael Crichton tamin'ny iray amin'ireo sonia bokiny. Teo no nomeko azy ny bokiko, Fiverenan'ny revolisionera. Rehefa fantatr'i Crichton ny momba ny asako tamin'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray dia nanontany izy hoe: "Ianao ve ilay nandefa tamin'ny Internet fa izaho dia teraka tao amin'ny vatana vaovao indray i Rabelias?" Namaly aho hoe: “Eny.”
Raharaha fanalefahana indray an'i William Wells Brown | Michael Bernard Beckwith
Maty i Hans Christian King tamin'ny Janoary 16, 2019. Tamin'ny andiany farany teo amin'ny asany, i Hans dia lasa mpandahateny mpamangy matetika tao amin'ny Agape International Spiritual Center any Culver City, California, izay tarihin'i Reverend Michael Bernard Beckwith. Ny mahaliana azy, satria ny fiainana taloha ho an'i Reverend Beckwith dia naterina ihany koa. Faha-19 taonjato faha-XNUMX tafo fanafoanana.
Ny Reverend Beckwith dia tsara fanahy nanolotra fonosana iray izay misy ny asako fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray tamin'ny filoha Bill Clinton rehefa nitsidika ny Trano Fotsy i Beckwith, raha mbola teo amin'ny toerany i Clinton. Raha te hahalala bebe kokoa dia mankanesa any:
Raharaha teo aloha niainan'i William Wells Brown | Michael Bernard Beckwith
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana manaitra eo amin'i Nostradamus sy i Hans Christian King. Ny endri-tarehin'i Rabelais sy Michael Crichton dia mifandraika, toa an'i William Wells Brown sy i Reverend Michael Bernard Beckwith.
Innate Past Life Talent: Ny fahaizana ara-tsaina dia tsikaritra amin'ny fiainan'i Nostradamus sy i Hans King. Rabelais sy Michael Crichton dia samy mpitsabo avokoa na ny mpitsabo, ary koa ny mpanoratra fiction tena nahomby, izay samy nanoratra boky misy ny biby goavambe. Rabelais dia nanoratra momba an'i Gargantua sy Pantagruel, raha tany Jurassic Park, Crichton dia nanoratra momba ny dinôzôro goavambe izay velona indray tamin'ny alàlan'ny fampiasana ADN dinôzôro tafarina. Ny fanehoan-kevitra biokimika izay mahatonga ny fahaterahan'ny dinosaurs azo atao ara-teôria azo atao Ny fanehoan-kevitra amin'ny alàlan'ny Polymerase, izay noforon'i Nobel Laureate, Kary Mullis.
Ny mahaliana dia ny Dr. Mullis sy ny vadiny Nancy dia samy nanaiky ny hiseho ao amin'ny bokiko ateraka indray toy ny reincarnations Benjamina sy Julia Rush.
Fiovana eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiaraha-monina: Nostradamus sy Rabelais dia frantsay, fa i Hans Christian King sy Michael Crichton dia teraka tany Etazonia.